Daraasada 2020 Waxay Muujineysaa THC Waxay Saameyneysaa Waxqabadka Xusuusta Shaqeynta Muuqaalka • Dawooyinka Inc.eu
Waxaa si weyn loo rumaysan yahay in tetrahydrocannabinol (THC), qaybta ugu weyn ee nafsaaniga ah ee xashiishadda, waxay saameyn ku leedahay xusuusta isticmaale daroogada. Si kastaba ha noqotee, in yar ama maya daraasado ayaa la heli karaa. Koox baadhitaan oo Mareykan ah ayaa isku dayay inay ka jawaabaan su'aasha si ay wax badan uga ogaadaan arinta.
THC iyo kuwa kale cannabinoids sida CBD siyaabo kala duwan u saameeya jirka (aadanaha). Tusaale ahaan, halka CBD ay inta badan la xiriirto waxtarrada caafimaadka sida awoodda ay u leedahay inay ku yareyso dareenka walaaca iyo niyadjabka, THC waxay caan ku tahay abuurista waxa loogu yeero sare.
Waxay yiraahdaan sare u kaca boqolkiiba THC, waxyeello intaa ka badan oo ay geysan karto. Saamaynta way kala duwanaan kartaa; dhibaatooyinka fikirka, diirada, iyo shaqo badan ayaa la sheegaa inay yihiin astaamaha ugu caansan.
Si kastaba ha noqotee, koox cilmi baaris ah ayaa heshay caddayn cilmiyeed iyo xog yar oo lagu taageerayo aragtidan.
Sidaa darteed kooxdu waxay go'aansatay inay samaysato mid u gaar ah cilmi baaris iyadoo ay jiraan maaddooyin aad u tiro badan oo ka qayb qaadanaya hawlo badan oo xusuus ah marka loo eego daraasadihii hore.
Maxaa ku dhacay cilmi baarista THC iyo waxqabadka?
Baarayaasha waxay sameeyeen laba tijaabo oo laba-indhoole ah, oo la kala soocay, oo midkiiba 24 qof oo qaan-gaar ah oo caafimaad qaba celcelis ahaan da'doodu tahay 23.
Intii lagu gudajiray daraasadii ugu horeysay, kooxdu waxay uqeybsaneyd labo, kuwaas oo heley 15 mg oo ah THC ama kaniini panobo. Daraasadii labaad, waxay abuureen seddex koox: qaar waxay heleen 7,5 mg qaadasho oo ah THC, qaar 15 mg THC, iyo kuwa kale oo helay kiniiniyada placebo.
Maxaa ku dhacay cilmi baarista THC? (afb)
Ka dib qaadashada kaabsoosha, maaddooyinka waxay ka qayb qaateen hawl xusuus-shaqo ah.
Ugu dambeyntii, daraasadda, oo lagu daabacay Neuropsychopharmacology, in THC ay dhab ahaantii saameyn ku yeelato xusuusta shaqada ee muuqaalka ah iyagoo ku meeraysanaya fikrado isla markaana caqabad ku ah waxqabadka kormeeraha
Baarayaasha waxay ogaadeen in kuwa helay 15 mg mg oo ah THC ay si aad ah uga liiteen tijaabooyinka xasuusta shaqada ayna ku dhib qabeen diirad saarida howlaha. Si kastaba ha noqotee, dadka ku jira qiyaasta 7,5 mg THC waxay sameeyeen wax yar oo ka xun dadka ku jira kiniiniyada placebo.
Gabagabadii, in kasta oo dabcan cilmi-baaris dheeraad ah loo baahan yahay si noogu soo dhowaato faham buuxa oo ku saabsan saameynta THC ee jirka (aadanaha), natiijooyinkan cusub waxay saameyn ku yeelan karaan tijaabooyinka mustaqbalka.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), PsyPost (EN)
cannabiscaafimaad lehcilmi baarisTHC
Cilmi baaris ayaa muujisay in bukaanada qaba kansarka qaba ama aan lahayn kansar ay isticmaalaan noocyo kala duwan oo marijuucaan ah
Dadka qaba kansarka qaba iyo kuwa aan lahaynba, waqti kadib, waxay umuuqdaan qaab xoog badan oo marijuana caafimaad ah ...
Abaal-marinta abaalmarinta ah ee loo yaqaan 'Dose' ayaa imaaneysa Amsterdam Febraayo 29. Sheekada foosha xun ee dukumintari ahaan ...